Ithegi: frequency | Martech Zone
Sabelane ngamanani-manani ngezizathu zokuba kutheni abantu bengabhalisi kwii-imeyile zakho zentengiso okanye kwiileta zeendaba. Ezinye zazo zisenokungabi sisiphoso sakho, njengoko ababhalisi begcwele ii-imeyile ezininzi kangangokuba bafuna nje isiqabu. Xa umbhalisi efumana kwaye ecofa kwikhonkco elingabhaliseli kwi-imeyile yakho, wenza ntoni ukuzama ukubasindisa? Kutshanje ndiye ndenza nje ngeSweetwater, indawo yezixhobo yeaudio ebimnandi kuyo
Akukho mntu ulinde i-tweet yakho elandelayo, uhlaziyo lwenqanaba okanye iposti yebhlog ukuze bathenge ngokulandelayo. Kusoloko kukho ithuba lokuba ungakhuthaza umntu ukuba athenge, kodwa akunakwenzeka ukuba uqikelele xa amathemba ekulungele ukuthenga kwakhona. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukubakhona xa ithemba lakho likulungele ukugqiba. Baza kuba phi? Siyaqonda kwindlela yokuziphatha yangoku kwi-Intanethi ukuba uninzi lwethemba elikwi-Intanethi liya kuthi
Ukuthengisa indawo yogcino lwedatha konke malunga nokuziphatha kwesalathiso, ukubalwa kwabantu kunye nokwenza uhlalutyo kumathemba akho ukuze uzithengise ngobukrelekrele. Ndibhale isicwangciso semveliso kwiminyaka embalwa edlulileyo ukunika amanqaku kubhalisi be-imeyile ngokubhekisele kukuziphatha kwabo. Oku kuyakuvumela umthengisi ukuba abeke isahlulo sababhalisi ngokusekwe ekubeni ngubani owayesebenza kakhulu. Ngokukhomba kwindlela yokuziphatha, abathengisi banokunciphisa umyalezo, okanye bavavanye imiyalezo eyahlukeneyo, kwabo babhalisile abo